आजबाट नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बन्दै
असार १४, २०७९ ०८:४२:०७
नेपाल आजदेखि दक्षिण एसियाको पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बन्दैछ । दिउँसो १२ बजे राष्ट्रिय सभा गृह भृकुटीमण्डपमा आयोजित ‘खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर नेपाल समारोह’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
असोज १३ सोमबार २०७६
काठमाडौ नेपाल आजदेखि दक्षिण एसियाको पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बन्दैछ । दिउँसो १२ बजे राष्ट्रिय सभा गृह भृकुटीमण्डपमा आयोजित ‘खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर नेपाल समारोह’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुहुनेछ । त्यसपछि नेपाल आजैदेखि दक्षिण एसियाको पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बन्नेछ ।
सरसफाइ गुरुयोजनालाई २०६८ साल साउन २९ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले २०६८ साल असोज १२ गते प्रमाणीकरण एवं लोकार्पण गर्नुभएको थियो । गुरुयोजनाको मर्म अनुसार विभिन्न जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने दिनमा आईपुगेको हो । यद्यपि कतिपय संघसंस्थाले गुरुयोजना लागु हुनु भन्दा अगावै सरसफाइ कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए । आफूखुसी सञ्चालन गर्दैै आएका ती कार्यक्रमहरुमा भने एकरुपता थिएन ।
गुरुयोजना लागु भएपछि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सरसफाइलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाईएको थियो । त्यसक्रममा २०६८ सालबाट अभियान सुरु भएको थियो ।
चितवनबाट प्रारम्भ गरिएको अभियानमा पहिलो खुलादिसामुक्त जिल्ला कास्की, दोस्रो चितवन र तेस्रो तनहुँ घोषणा भएको थियो । अहिले पछिल्लो जिल्ला भोजपुरलाई २०७६ असोज ४ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि देशका ७७ वटै जिल्ला खुलादिसामुक्त घोषणा भएका हुन् ।
नेपाल आज खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि पूर्ण सरसफाइको अभियान तर्फ अग्रसर हुने खानेमन्त्री बिना मगरले बताउनुभयो । उहाँले २०६८ सालमा सुरु भएको सरसफाइ गुरुयोजनासँगै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानले व्यापकता पाएर नेपाल नै खुला दिसामुक्त राष्ट्र हुने स्थितिमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
हालसम्म देशका ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीहरुमा शौचालय बनिसकेका छन् । नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भए लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले समेत खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति शौचालय ?
राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।
प्रदेश १ मा ९ लाख ६५ हजार २७२
प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९
प्रदेश नं. ३ मा १६ लाख २२ हजार १९३
गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ४८ हजार २१०
प्रदेश ५ मा सात लाख ९३ हजार ९९०
कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख सात हजार ९६५
र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ८९ हजार १२ शौचालय बनेका छन् ।
सोमवार, आश्विन १३, २०७६, ०९:०९:००